01 June, 2013 in Wararka by Baidoanews Webmaster
waa xaqiiq waana hubaal waa ay yer yihiin laakiin waa ay ka warhaayaan deegaanadooda haba ugu horeeyo Danjire Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan oo habeen iyo maalin xiriiro lasameeya guud ahaan wadanka soomaaliya agar ahaana halkii asal ahaan asaga kasoo jeedey.
Danjiraha waa qof bini aadam ah oo habeen iyo maalin u taagan unuu samatabixiyo dadkiisa iyo dalkiisa, hadaba waxa ala is weydiinayaa Muxuu usoo qabtay deegaanka ama warkaan waa xayeysiis:
Bil Habaty Bood Ma Reebaaw: Danjiraha waxaa ugu dambeysey oo uu qabtay waxaanu ku sheegi kartaa dhowr qodob oo muhiim ah
- Wuxuu hindisey oo furey oo Baydhabo ka hergeliyey iskool caan ahaa oo la oron jirey AL- QAMAR Technolage & Computer kaasoo ay wax ku barteen in kabdan 100o dhalinyero ah ayadoo soomalai dhanw aagaas aan laga heli jirin ama laga kasi jirin Aalada Computer-ka.
- Dadka Reer Baydhabo ayadoo Baydhabo Reer magaal iyo reer baadiyaba biyaha la wada dhaansado oo ana jirin guri biyo toos looga helo ayaa wuxuu abuurey mashruuc biyo gelin ahaa oo loogu magac darey Mumin Global kaasoo isla markaas laga shaqaaleeyey in labdan 170 ruux oo baaga muundo ahaayeen.
- Wuxuu ka qeyb galay ama kaalin muhiim ah kulahaa Dib Usoo ceintii karamadii Dadka uu kasoo jeedo kalkii lagu soo duuley ninki og ayaa og.
-Baydhabo 200 ruux baaga muundo ahaa wuxuu ka shaqaaleeyey oo Baydhabo keeney Shirkad iibin jirtey Tigaarka oo laamooyin badan ka furatay degmooyinka iyo gobolada Arlaadii.
- Wuxuu ahaa ninkii Xildhibaanadii DM qado usameeyey Sanadkii 2011 xiligii Abaartii Biyo la'aanta ka taagneyd Baydhabo & Nawaaxigeeda oo u guradey Dadkii Oonka haayey waagaas oo ay u direen Booyado Biyo geeya Guud ahaan Goboladaasi.
- Wuxuu Deeq Lacageed Ugu Deeqey Sportskii Gobolka walow kooxixii waagas jirey ay is qabqabsi lacagtaasi u calfan waayeen ölaakiin weli loo haayo.
- waxaa jiro kaalmooyin badan oo uusan rabin in magaciisa lagu sheego oo ugu deeqo qoysas dhibaataysan ama xanuunsan
- Waa tii uu balanqaadey Marxuum Shaar Gaduud in loo sameynayo oo uu balanqaadey xitaa hadii kaalmo kale uwaayo in shaqsiyadiisa uu bixin lahaa lacagta ambabixinta meydka Marxuum Shaar Gaduud, laakiin waa ti uu garabka iyo kaalmada uu ka heley Dowlada.
Marxuum Cabdalla waa tii uu geeyey Isbitaalka Istanbul ugu qaalisan isla markaan meydkiisa siw anagsan ua amba bixiyey Turkey oo ku simey xildhibaanadii & Dowladii Soomaaliya maadaama Reer Muqdisho ay ilaabeen Abaalkii Dr.Cabdalla oo ahaa Aabaha Kumanaan Soomaali ah.
-Danjire Maxamed Mursal Waxaa ugu dambeysey oo kaalin wanagsan ka galay Caawintii ama Gargaarkii Walaalkeena Maana Weel oo ku xanuunsanaa Baydhabo oo inoo sheegey in lacagta ugu badan aduunkorkiisa heley ay gaareysey 150 sh.so laakiin waxaa lasiiyey mar qura $300 oo halsaac ooynayey kadib markii lacagtaasi qaatay maanaweeli oo loo sheegey qiimaha lacagtaasi lagu safirfo soomali ahaan.
masoo koobi karno kaalinta Danjire Mursal laakiin waxaa kudayasho iyo dhiiranaan laga rabaa Danjiriyaasha kale ee DM ee ka howl gala dalka dibadiisa.